यस्ताे छ तपार्इकाे २०७४ आश्विन महिनाको मासिक राशिफल - सफलताका सुत्रहरु
Home/जीवनशैली/यस्ताे छ तपार्इकाे २०७४ आश्विन महिनाको मासिक राशिफल
आश्विन महिनाको समग्र ग्रहगोचर र आमजीवनमा त्यसको प्रभाव
आश्विन महिनाको सङ्क्रान्ति आइतबार परेको छ र सूर्यको राशि सङ्क्रमणको समयमा मकर लग्न रहेको छ । समग्र ग्रह परिवेश यस्तो रहने छ – सूर्यले आश्विन महिनाभरि कन्या राशिमा विचरण गर्ने गर्दछन् । मङ्गल ग्रहले सुरुमा सिंह राशिमा र २८ गतेपछिमात्र कन्या राशिमा प्रवेश गर्नेछन् । सुरुमा सिंह राशिमा रहेको बुध ग्रह यसबीचमा ०९ गतेपछि नै कन्या राशिमा प्रवेश गर्नेछन् र जम्मा १७ दिन कन्या राशिको भ्रमण गरी महिनाको अन्त्यमा २६ गते बुधले तुला राशिमा प्रवेश गर्नेछन् । शुक्र ग्रहले महिनाको पूर्वार्द्धमा सिंह राशिमा र २२ गतेपछि कन्या राशिमा विचरण गर्ने छ । बृहस्पति, शनिश्चर, राहु र केतु ग्रहले गत महिना झैं यस महिनामा पनि क्रमशः तुला, बृश्चिक, कर्कट र मकर राशिमा उपस्थिति जनाउने छन् । यस्तो ग्रह परिवेशमा विश्लेषण गर्दा यो महिना सकारात्मक देखिंदैन । सामाजिक अपराधका घटनामा बृद्धि हुनेछ । मौसमी प्रतिकूलताले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्ने छ । कतै अतिवृष्टि र कतै अनावृष्टिको सम्भावना देखिन्छ, यद्यपि महिनाको पूर्वार्द्धमा अधिकतम भूभागमा खडेरीको प्रकोप हुनसक्छ । जनजीवनमा रोगव्याधिका प्रकोपहरू देखिन सक्छन् । सुन, चाँदी, तामा आदि धातुका सरसामानको मूल्यबृद्धि हुनेछ । खाद्यान्न, फलफूल र तुलफूल एवं सागसब्जीको मूल्य पनि आकासिन सक्छ । कतैकतै साम्प्रदायिक तनाव, यान दुर्घटना, चोरी, डकैती आदि अप्रिय घटनाको समाचार सुन्न पाइन्छ । राजनैतिक क्षेत्रमा सामान्य देखिन्छ भने महिनाको मध्यभागमा सेयर कारोबारमा मन्दी छाउने छ ।
जे गरे पनि सफलता हात पर्ने समय रहने छ । पहिले देखिएका प्रायशः समस्याहरूको निराकरण हुनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । पछाडि उछित्तो काड्ने र कुरा काट्नेहरू चुप लाग्नेछन् । नोकरी र व्यायसायिक जीवनमा सुधार आउने छ । प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ । आफ्नो सर्कलमा सम्मान र साख मिल्नेछ । बुद्धि क्षेत्रमा राशिस्वामी मङ्गल रहेकाले राम्रो निर्णयात्मक सामर्थ्य प्राप्त हुनेछ । विवेक, बुद्धि र समुचित अनुमानका कारण सामाजिक सम्मान प्राप्त हुनेछ । कल्पना र भावुकतामा मन रुमल्लिने सम्भावना पनि छ । नयाँनयाँ उद्यम र योजना कार्यान्वयन गर्नाले सफलता मिल्नेछ । सातौं भावमा भाग्येश बृहस्पतिको उपस्थिति भएकाले प्रणय र रोमान्सका लागि पनि राम्रै छ । सृजनशीलताको प्रशंसा र सराहना हुनेछ । पारिवारिक सुखमा अभिबृद्धि हुनेछ । मित्र र शुभचिन्तकले पूर्ण सहयोग गर्नेछन् । महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित सम्पर्क बढाउनु हुनेछ । एउटा स्मरणीय यात्रा हुने सङ्केत पनि छ । सामान्यतया यस महिनाको ०१, ०९, १०, ११, १८, १९, २०, २७, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
पाँचौं भावमा रहेको सूर्यको प्रभावले मनमा ठूलो उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुनेछ । यद्यपि चिन्तनमननमा बढी निर्लिप्त हुनु र प्रेमप्रसङ्ग, प्रणय एवं रतिरागका क्षेत्रमा निर्लिप्त हुन यो समय उपयोगी हुँदैन । पढाइलेखाइ र बौद्धिक क्रियाकलापका लागि उचित समय छ । आकस्मिक यात्राको अवसर आउन सक्छ । राशिस्वामी शुक्रले यस महिनामा चतुर्थ र पञ्चम भावमा भ्रमण गर्ने भएकाले बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा बित्नेछ । पदप्रतिष्ठामा अभिबृद्धि हुनेछ । आम्दानीका मार्गहरू बढ्ने छन् । पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ । पञ्चमेश बुध स्वगृही बन्नाले २२ गतेपछि दृढ़ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक गुम्दैन र समुचित काम हुनेछ । भाग्येश शनि सातौं भावमा रहेकाले पतिपत्नीका बीचमा केही समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्, सचेत रहनुपर्छ । दैनिकी सञ्चालनका क्रममा पनि समस्या हुनसक्छ । अनावश्यक आरोपका कारण सजाय भोग्नु पर्छ । सानातिना झञ्झट वा विवादबाट जोगिनु बेस हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०२, ०३, ११, १२, १३, २१, २२, २९, ३० र ३१ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
कडा मिहिनेत र परिश्रम गर्ने समयका रूपमा असोज महिना उपस्थित भएको छ । मन कुकर्म र गलत आचरणतर्फ आकर्षित बन्न सक्छ । मातापिता र अभिभावक वर्गको स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताको विषय बन्नेछ । यस महिनामा राशिस्वामी बुध तृतीय र चतुर्थ भावमा रहने हुँदा मिहिनेतको राम्रो नतिजा हात पर्ने छ । ससाना यात्राबाट राम्रो फल मिल्नेछ । विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ । दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूबाट समेत सहायता मिल्नेछ । नयाँनयाँ व्यक्तिहरूसित सम्पर्क हुनाले भाग्य बढ्ने छ । पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ । पञ्चमेश शुक्र र नवमेश शनिको प्रभाव पनि सकारात्मक नै रहने सङ्केत छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुनेछ । नोकरी वा व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो सुधार आउने छ । प्रभावशाली व्यक्तिसित सम्पर्क बढ्ने छ । दैनिकी सञ्चालनका क्रममा फुर्तिको अनुभूति हुनेछ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीले बद्ख्वाइँ गर्ने प्रयास गर्न सक्दैनन् । आर्थिक रूपले यो समय अनुकूल रहनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०४, ०५, ०६, १४, १५, २३, २४ र ३१ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
तेस्रो घरमा रहेको सूर्यको प्रभावले पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ । बहुप्रतीक्षित इच्छा, आकाङ्क्षा र उद्देश्य सफल हुनसक्छन् । यस अवधिको अधिकतम समय घुमघाम र भ्रमणमा बित्नेछ, साथै ससाना यात्रा फलदायी र भाग्यशाली सिद्ध हुनेछन् । घरपरिवारका सदस्य, मित्र र नातागोता माझको सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यस अवधिभरि राम्रै छ । भाग्येश बृहस्पतिको प्रभावले शुभफल नै मिल्ने सङ्केत छ, घरायसी सुखसुविधा बढाउन र चलअचल सम्पत्ति आदिमा खर्च बढ्ने छ, साथै बन्दव्यापारको विकासमा पनि धनव्यय हुनेछ । अचानक अयाचित लाभ मिल्ने सम्भावना पनि छ । ख्याति र सम्मानमा अभिबृद्धि हुनेछ । आकस्मिक रूपमा धनप्राप्तिको योग त छ, तर पञ्चमेश मङ्गलको केही नकारात्मक प्रभाव भएकाले आर्थिक मामिलामा सचेत र सतर्क भएको जाति हुन्छ । मङ्गलकै कारण घरपरिवारकै सदस्यका बीचमा मनोमालिन्य बढ्नाले एवं ससाना कुरामा झैझगडा हुनाले मानसिक तनाव बढ्नसक्छ, मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नु बेस हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०६, ०७, ०८, १६, १७, १८, २५ र २६ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
राशिमा रहेको नवमेश मङ्गलको प्रभावले भाग्यबृद्धि गर्ने अवसर प्राप्त हुनसक्छ । उता बुध र शुक्रको प्रभाव तथा पञ्चमेश बृहस्पतिको अनुकूलताले प्रतिभा, दक्षता र योग्यता प्रदर्शन गर्नाले राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ । ससाना यात्राबाट सफलता मिल्नेछ । पारिवारिक उत्थानका निम्ति कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न प्रयास गरिने छ । सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ । महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व र विद्वानहरू सम्पर्कमा रहनेछन् । सम्मान प्राप्त हुने र ख्याति बढ्ने समय छ । कामको बोझ धेरै नै हुन्छ, तर परिणामका दृष्टिले फलदायी नै रहने समय छ । तर राशिस्वामी सूर्यले दोस्रोभावमा प्रवेश गरेकाले आर्थिक कारोबारमा निकै सचेत हुनुपर्छ, जोखिमपूर्ण र जुवाजन्य काममा दिलचस्पी नदिनु नै बेस हुनेछ । शारीरिक तनाव र बोझलाई झेल्नसक्ने सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक झैझमेला र समस्या बढ्नाले मन विचलित हुनसक्छ । त्यसैले घरायसी समस्या र परिवारजनका भावनालाई समेटेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०१, ०९, १०, ११, १८, १९, २०, २७, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
यो महिना धनसम्पत्ति र सुखसुविधा आर्जन गर्ने पक्षमा आकर्षित रहने समय हो । आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुनेछ । राशिस्वामी बुधले पनि महिनाको ०९ गतेदेखि २६ गतेसम्म आफ्नै राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले यस अवधिमा आयक्षेत्रमा उल्लेखनीय अभिबृद्धि हुनेछ । परिवारका सदस्य र अन्य व्यक्तिको हितका लागि धनखर्च गर्न मन हौसिने छ । लोकप्रियता हासिल हुनेछ । अचल सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ । कला, कविता र साहित्यमा रूचि बढ्ने छ । आफ्नो रूचिको क्षेत्रमा गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ । सामान्यतया सबै किसिमका सुखभोग प्राप्त हुनेछ । पञ्चमेश शनि तृतीय भावमा रहने तथा भाग्येश शुक्रको समेत २२ गते आफ्नै राशिमा प्रवेश गर्ने हुँदा आत्मविश्वासको मात्रा बढ्ने छ । नोकरी र बन्दव्यापारमा उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त हुन्छ । नयाँनयाँ उद्योगधन्दा र व्यवसायको प्रारम्भ हुने वा नयाँ रोजगारीको सङ्केत छ । आम्दानीको मात्रा बढ्ने छ । सामान्यतया यस महिनाको ०२, ०३, ११, १२, १३, २१, २२, २९, ३० र ३१ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
राशिस्वामी शुक्रको राज्यस्थान उपस्थिति भई महिना प्रारम्भ भएकाले प्रत्येक प्रयासमा सफलता प्राप्त हुनेछ, बहुप्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउने छन् । मित्र र सहयोगीले पूर्ण सहयोग गर्नेछन् । दाजुभाइ र दिदीबहिनीले समेत आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्ररी काम गर्नेछन् । महिनाको अन्त्यमा शुक्रका साथै भाग्येश बुधले समेत बाह्रौं भावमा प्रवेश गर्ने हुँदा खर्च धेरै हुनेछ तर आम्दानीका मार्ग खुल्ला रहने भएकाले तनाव हुँदैन । देशविदेशको यात्रा वा तीर्थाटनको अवसर जुट्ने सङ्केत देखिन्छ । प्रणय र रोमान्सका क्षेत्रमा सफलता नै मिल्नेछ । यद्यपि बाह्रौं भावमा नै महिनाभरि सूर्यको उपस्थिति हुने हुँदा यस अवधिमा क्षणिक आवेग र उन्मादलाई नियन्त्रण गर्नु र कुनै निर्णय लिनुपूर्व राम्रो सोचविचार गर्नु आवश्यक छ । नातागोताका सदस्य एवं मित्रवर्गसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु वाञ्छनीय छ, अन्यथा एकआपसमा तनाव उत्पन्न हुनसक्छ । जुवातास, लटरी र सट्टापट्टातर्फ नहौसिनु ठिक हुनेछ । ऋणसापटी लिनुदिनु उपयोगी हुँदैन । सामान्यतया यस महिनाको ०४, ०५, ०६, १४, १५, २३, २४ र ३१ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
राशिस्वामी मङ्गल कर्म क्षेत्रमा उपस्थित भई सुरु भएको यस महिनामा सूर्य राज्यस्थानमा रहेकाले यो समय इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने समयका रूपमा उपस्थित भएको छ । लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ । उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ । व्यवसायिक क्षेत्र र व्यापारको विस्तार हुनेछ । नातागोताका सदस्यहरूबाट सहायता मिल्नेछ । करार र सम्झौताबाट लाभ मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवन, घरायसी सुख, प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि उत्कृष्ट समय छ । आय आर्जनका मार्गमा सुधार आउने छ । लामो यात्रा सुखद र सफल हुनेछ । तर पञ्चमेश बृहस्पति बाह्रौं भावमा रहेकाले सन्ततिको चिन्ताले सताउने छ, तिनको उन्नति÷प्रगतिका निमित्त खर्च बढाउनु पर्ने परिस्थिति बन्नेछ । आफन्तले निराशा र वैमनस्यता प्रकट गर्नेछन् । राशिमा रहेको शनिश्चरले परिश्रमी बनाउने छ, तर प्रत्येक काममा बाधा आउने र ढिलो हुने सम्भावना छ । सामान्यतया यस महिनाको ०६, ०७, ०८, १६, १७, १८, २५ र २६ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
कर्मक्षेत्रको सूर्य, राज्यस्थानको राशिस्वामी बृहस्पति र भाग्यमा रहेको मङ्गलका कारण यस अवधिलाई सन्तोषजनक समयका रूपमा लिन सकिन्छ । व्यापार र नोकरीका माध्यमबाट लाभ मिल्नेछ । हाकिम, मातापिता र वरिष्ठ व्यक्तित्वको सहानुभूति र आशीर्वाद मिल्नेछ । व्यवसायिक÷व्यापारिक दृष्टिले फलदायी यात्राको सम्भावना छ । अधिकतम आर्थिक समस्याहरू हल हुनसक्छन् । घरपरिवारका बृद्ध सदस्यबाट सहयोग र आशीर्वचन मिल्नेछ । दूरदराज वा दुर्गम स्थानमा गरिएको यात्रा सफल हुनेछ । विदेश अथवा दूरदराजमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूसितको सम्बन्ध सुमधुर रहने छ । नयाँनयाँ उद्यम र इलममा सङ्गलग्न हुनु पर्ने छ । आम्दानीका मार्ग बढ्ने छन् र आयका नयाँनयाँ स्रोतहरू प्राप्त हुनेछन् । यद्यपि खर्च पनि बढ्ने छ, तर आम्दानीका मार्गहरूभन्दा बढी खर्च हुनेछैन । चिट्ठा, लटरी वा सट्टापट्टाबाट पनि आय हुने सम्भावना छ । समय राम्रो छ, समयको भरपूर सदुपयोग गर्नु बेस हुनेछ । यद्यपि यो महिना अत्यन्त क्रियाशील र व्यस्त रहने र कर्मक्षेत्रको परीक्षणको समय हो । सामान्यतया यस महिनाको ०१, ०९, १०, ११, १८, १९, २०, २७, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
राज्यस्थानमा रहेको राशिस्वामी शनिश्चरको शुभप्रभाव छ, त्यसैले समस्त इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुनेछन् । नयाँ काम र उद्यम सुरु हुनेछ । मित्रवर्ग र हितैषीबाट राम्रो सहयोग मिल्नेछ । व्यापारका माध्यमबाट लाभ पाइने छ । निकटतम नातेदारका बारेमा कुनै राम्रो खबर प्राप्त हुन सक्छ । टाढा बसेका व्यक्तिहरूसित राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ । प्रणय सम्बन्धका लागि पनि राम्रो समय छ । परिवारका सदस्यहरूको व्यवहार तपाईंप्रति अनुकूल रहने छ । सूर्यले महिनाभरि भाग्य भावमा उपस्थिति जनाएर मिश्रित प्रभाव पार्नेछ । मातापिता र अभिभावकवर्गको स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताको विषय बन्नसक्छ । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुनेछ । विश्वासको वातावरण बन्नाले व्यावसायिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा सफलता आर्जन हुने समय छ । धनार्जनका दृष्टिले ठिकैको समय रहने छ । तर आठौं भावमा मङ्गल रहेकाले बाटो काट्दा, सवारी चलाउँदा र हतियार प्रयोग गर्दा सचेत हुनु राम्रो हो । सामान्यतया यस महिनाको ०२, ०३, ११, १२, १३, २१, २२, २९, ३० र ३१ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
असोज महिना तपाईंका लागि तनावपूर्ण समय रहने छ । आठौं भावमा सूर्यको उपस्थिति छ, त्यसैले अचानक विविध समस्या देखा पर्न सक्छन् । पारिवारिक र नातागोताभित्रका सदस्यहरूसँग राम्रो व्यवहार पुर्याउन नसक्नाले विनाकारण झगडा र विवाद हुनेछ । स्वास्थ्यस्थिति पनि कमजोर रहने छ, त्यसैले खानपान, आहारविहार र स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनु बेस हुनेछ । शङ्कास्पद कारोबार र क्रियाकलाप सहभागी नबन्नु राम्रो हुनेछ, त्यस्तै खराब र अनैतिक मानिने कामभन्दा टाढा रहनु नै कल्याणकारी हुनेछ । महत्त्वपूर्ण कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुअघि राम्ररी पढ्नु बेस हुनेछ । त्यस्तै सातौं भावमा रहेको मङ्गलको प्रभाव पनि सन्तोषजनक देखिंदैन, दैनिक कामकाज र व्यवहारमा अनेकानेक कठिनाइको सामना गर्नुपर्छ । तर अत्तालिइहाल्ने स्थिति पनि छैन, राशिस्वामी एघारौं भावमा रहेकाले प्रसिद्धि र सम्मानमा बृद्धि हुनेछ । विद्वानहरूका साथमा घुलमिल हुने मौका आउने छ । बन्दव्यापारमा बढावा हुनेछ । विपरीत लिङ्गीहरूबाट सहायता मिल्नेछ । सुखद यात्रा हुने सङ्केत पनि छ । किनमेलका क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०४, ०५, ०६, १४, १५, २३, २४ र ३१ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
मासाधिपति सूर्यको सातौं भावमा उपस्थिति रहेकाले त्यति अनुकूल समय हुँदैन, उता राशिस्वामी बृहस्पति आठौं भावमा रहने छ । त्यसैले यस अवधिमा मानसिक रूपले तनावग्रस्त र अस्वस्थ हुने सम्भावना देखिन्छ । कडा मिहिनेत गर्दा पनि राम्रो परिणाम हात पार्न सकिने छैन । घरपरिवारभित्रका वादविवाद, झैझगडा र समस्याहरूमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुनेछ । वाहनादिमा यात्रा गर्दा सावधान हुनु बेस हुनेछ । नयाँ ठाउँमा लगानी गर्ने प्रयत्न नगर्दा राम्रो हुन्छ । अन्धविश्वास र भ्रमले डेरा जमाउने वेला पनि हो, यो । महत्त्वाकाङ्क्षा र असम्भव आशा जाग्नाले निराश हुन सक्नुहुन्छ । जुवातास, लटरी, चिट्ठा र सट्टापट्टामा धनलगानी गर्नुभयो भने पछुतो हुनेछ । तर भाग्येश मङ्गलको केही सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हुने भएकाले डराइहाल्नु पर्ने परिस्थिति पनि छैन, पेसागत र व्यवसायिक परिस्थतिमा सुधार आउने छ । पेसा र व्यवसायमा देखिएका अड्चन र बाधा हटाउन तथा शत्रुदमन गर्न प्रयास गरिने छन् । सामान्यतया यस महिनाको ०६, ०७, ०८, १६, १७, १८, २५ र २६ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
श्रीकृष्णको निधन भएको लामो समयपछि स्वेताले सम्बन्ध फेरिन !
मन छुने प्रेमकथा “अन्धो पति” (दुर्इ मिनेट लाग्छ, अवस्य पढ्नुहाेला)
२२ कार्तिक २०७५, बिहीबार १०:०७
साप्ताहिक राशिफल : (वि.सं. २०७४ पौष २३ गतेदेखि वि.सं. २०७४ पौष २९ गतेसम्म)
२४ पुष २०७४, सोमबार ०८:५०
हामीले खाने कागतीको फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी, जान्नुहोस कस्ता व्यक्तिले खानुहुँदैन कागती
२३ आश्विन २०७४, सोमबार २०:५०
७ माघ २०७४, आईतवार ११:५९
उत्कृष्ट मनछुने लाइनहरु शृंखला-१६
२१ चैत्र २०७५, बिहीबार २१:४३
भोट गर्न अब केही घण्टा मात्रै बाँकी रहदा नेपालकी शान शृंखला खतिवडाले आँफुलाई जिताउन मागिन् भोट
२१ मंसिर २०७५, शुक्रबार ०९:०१